eNasha.com - काठमाडौँको चकलेट जात्रा
त्यसै त काठमाडौँ, त्यसमाथि पनि जात्राको दिन ! त्यसै पनि काठमाडौँमा भीडभाड रहन्छ, त्यसमाथि पनि यदि जात्राको दिन छ भने त कुरै नगरौँ ! घोडेजात्राको दिन दिउँसो टुँडिखेलमा घोडाको चर्तिकला र अन्य रमाइलो हेर्नेको निकै भीँड हुन्छ । त्यही दिन पाटनमा एउटा घोडालाई बेस्कन जाँड खुवाएर ऊ मात्तिएको हेर्ने रमितेको पनि कमी हुँदैन । यही बेला काममाडौँका भलननीलगायत ४५/५० स-साना स्थानमा भने एउटा रमाइलो भेला जात्रा हुन्छ । त्यो भेला चाहिँ युवाहरुबीच 'चकलेट जात्रा'का रुपमा प्रख्यात छ । आउनुहोस्, यो चकलेट जात्राको प्रत्यक्ष समाचार हेर्नुहोस् ।
मर जाः नामक यो जमघट चाहिँ धार्मिक विश्वासमा आधारित छ । जसमा मृतआत्माले आफ्ना सन्तानको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि महादेव मन्दिरमा पूजा गरी शुरु हुन्छ । पूजा सकिएपछि गुठी र घरघरबाट ल्याइएका प्रसादहरु विशेषगरी बालबालिकाहरुलाई खुवाइन्छ । यसरी बालबालिकालाई प्रदान ग्रहण गराए, उनीहरु स्वस्थ, दीर्घार्यू र सम्पन्न रहन्छन् भन्ने पुरानो मान्यता छ ।
प्रसाद ग्रहणको कार्यक्रम सकिएपछि हुनेखानेहरुले बालबालिकाका लागि क्याडबरीदेखि लिएर हाजमोलासम्मका चक्लेटहरु बाँढ्ने गर्छन् । बालबालिकालाई चक्लेट भएपछि के चाहियो ? अघि खाएको दूध, विभिन्न किसिमका फलफूललगायतका प्रसाद बिर्सिएर यी चक्लेटमा हुर्रिएर झुम्मिन्छन् । कसले कति पाउने र कति नपाउने गणना हुँदै गर्दा भने छिप्पिएका युवाहरुले युवतीमाथि तिनै चक्लेटहरुले प्रहार गर्न थाल्छन् ।
'धेरै जसो चाहिँ राम्री तरुनीलाई चक्लेटले हान्न रमिते भएर छिर्छन्', टिपिकल नेवारी लवजमा ५५ वर्षीय पूर्णमान श्रेष्ठ, भन्छन्- 'तिनलाई अरु कुरासँग मतलब हुँदैन । खाली केटीहरु कहाँ छन् भनेर आँखा नचाइरहेका हुन्छन् ।' भर्खरै प्रसादस्वरुप खाएको एक घुड्की रक्सीको उन्मादिलो राग पूर्णमानको मुखबाट निस्कन्छ- 'आखिर बेलै यही हो रमाइलो गर्ने !' हुनसक्छ, उनलाई आफ्नो जवानीको दिन याद आएको होस् !
तर केही समययता चक्लेटले तरुनी तोकेर हान्ने परम्परा यहाँ चाहिँ निरुत्साहित हुँदै गएको छ । 'यसरी चक्लेटले युवतीहरुमाथि प्रहार गर्दा आफ्नो मौलिक संस्कृति बिग्रिने डर भयो', २८ वर्षीय राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्- 'त्यसैले स्थानीय क्लब र गुठीका प्रभावशाली व्यक्तिहरुले त्यसरी प्रहार नगर्न गरेको अनुरोध हिजोआज साँच्चिकै लागू भएको छ । केही उच्छृङ्खलका कुरा चाहिँ नगरौँ, उनीहरु त मौकैको ताकमा हुन्छन् !'
केही व्यक्ति हिजो 'चक्लेट जात्रा'मा हुने रमाइलोका लागि मात्र भए पनि जम्मा भएका थिए, तर ती सबै हिस्स बूढी हरिया दाँत भएर फर्किनु पर्‍यो । त्यहाँ विशुद्ध पूजाआजा र प्रसाद वितरणपछि प्रशन्न मुद्रामा बालबालिका फर्किए, हेर्दै रहरलाग्दा युवतीहरु पनि यस पटक चक्लेटको प्रहारबाट बच्न पाएकोमा फुरङ्ग थिए । यसरी एउटा विकृतिले डेरा जमाइसकेको जात्रामा पुनः मौलिकता फर्किसकेको देखेर संस्कृति प्रेमी मख्ख परेका थिए ।
festival streets माओवादी संविधानसभा awards पेट्रोल हल्ला मोबाईल अनुभव सेलेब्रिटी समलिङगी crisis hi-life events celebrity